Otu esi gbakọọ ọnụ ahịa ire ere: ndụmọdụ ga -enyere gị aka | Ozi ECommerce
Encarni Arcoya | 13/09/2021 10:47 | eCommerce
Were ya na ị mepụtara ngwaahịa ị na -anya isi nke ukwuu ma chọọ ire. Ị nwere ike nwee onye na -ere ahịa mbụ gị na -ajụ gị: ego ole ka ọ bara? Ị na -aga oghere ... Kedu ka esi gbakọọ ọnụahịa ire ere?
N'ihi na, ọ bụrụ na ị rịọ ntakịrị, ị ga -efu; Ma ọ bụrụ na ọ karịrị akarị, onye ahịa nwere ike ịtụle na ị rịọla ọtụtụ ihe, na ị chọghị inweta ngwaahịa a. Ọ bụrụ na ị na -echekwa, ma ọ bụ chee na ụdị ihe a na -eme na eCommerce gị na ọ bụ ya kpatara na ị naghị ere, mgbe ahụ anyị ga -enye gị ndụmọdụ gbasara otu esi agbakọ ọnụahịa ire ere ngwaahịa (yana ọrụ).
1 Etu ị ga -esi mara ọnụ ahịa ngwaahịa gị
1.1 Kedu ihe ndị a ga -elekwasị anya na ịtọ ọnụahịa ire ere?
2 Kedu usoro iji tọọ ọnụ ahịa ahụ
3 Ọnụ ahịa ọrịre dị ala ma ọ bụ dị elu ka mma?
Etu ị ga -esi mara ọnụ ahịa ngwaahịa gị
Ka anyị chee ya ihu, itinye ọnụahịa na ngwaahịa adịghị mfe dịka ịnye ọnụ ọgụgụ. Enwere ọtụtụ ihe na -ekpebi ihe ọnụahịa ire ere bụ, yanakwa ọtụtụ ụzọ na -enyere aka ịchọta ọnụ ahịa ahụ ziri ezi maka ndị ahịa na ụlọ ọrụ na azụmaahịa. Ya mere onye ọ bụla na -emeri. Mana olee otu ị ga -esi nweta ya?
Mgbe ị na -agbakọ ọnụ ahịa ire ere, a na -eburu n'uche ọtụtụ ihe. Otu n'ime ihe mbụ bụ, obi abụọ adịghị ya, ọnụ ahịa ngwaahịa a, ya bụ, ihe ị ga -eme iji mepụta ngwaahịa a. Dịka ọmụmaatụ, were ya na ihe ịchọrọ ire ere bụ akwụkwọ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị garala ebe obibi akwụkwọ, ha ga -agwa gị na akwụkwọ x na -eri x euro, nke ga -ekewa site n'akwụkwọ, ga -enye gị ọnụ ọgụgụ. Nke ahụ bụ ihe ị na -akwụ n'otu akwụkwọ, yana ihe, opekata mpe, ị kwesịrị ịlaghachi kwa akwụkwọ. Ka anyị kwuo na ọnụ ọgụgụ a bụ euro 5.
Nke ahụ pụtara na ọnụahịa ire akwụkwọ ahụ bụ, opekata mpe, euro 5. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị ree ya otu a ị gaghị enwe uru ọ bụla. N'ezie, ọ bụrụ na ị ga -eziga ya, ụgwọ mbupu ga -adị na akaụntụ gị, yabụ ị ga -atụfu ego.
Ya mere, na mmepụta nke ngwaahịa a, a na -etinye mmefu ndị ọzọ nwere na:
Nkwakọ ngwaahịa na ụgwọ mbupu.
Ọnụ nke awa niile ejiri mee ngwaahịa a.
Uru ị chọrọ inweta.
Ugbu a, nke ahụ apụtaghị na kama ịrịọ maka euro 5 anyị na -arịọ 50. Site n'akwụkwọ nnọchiteanya, ị nwere ike, mana ha ga -azụrụ gị? Ihe kacha ekwe omume bụ na mba. Ọ bụ ebe ahụ ka ihe ndị nwere ike inyere gị aka ịtọ ọnụahịa ire kacha mma ga -abata.
Kedu ihe ndị a ga -elekwasị anya na ịtọ ọnụahịa ire ere?
Iji gbakọọ ọnụ ahịa ere nke ngwaahịa, enwere usoro nke nwere ike ịba uru. Ọ bụ dị ka ndị a:
Ọnụahịa ere = Ọnụ * (100/100-Erite uru)
Agbanyeghị, ị ga -eburu n'uche na ihe ndị ọzọ na -emetụta usoro a, nke bụ:
Asọmpi a. Ịkwesịrị ịtọ ọnụahịa nke ọtụtụ ma ọ bụ obere anaghị ekewapụ gị nke ukwuu na nke asọmpi gị mana n'otu oge ahụ na -enye onye ahịa ihe ka ọ họrọ gị kama ịbụ onye asọmpi.
Ọnụ ọgụgụ uche. Mgbe ịzụrụ ihe dị 49,95 anyị maara na ị na -emefu euro 50. Mana ọtụtụ oge ihe a na -eche bụ na ị mefubeghị euro 50, mana obere, ọbụlagodi na ọ bụ cents 5 pere mpe.
Ihe onyonyo. Were ya na ịchọrọ ire ihe egwuregwu ụmụaka maka euro 50, mana ọ na -enye onyinyo nke ịbụ onye China. Ị ga -azụta ihe n'ọnụ ego ahụ? Ihe kacha ekwe omume bụ na mba. Ihe onyonyo a na etu ndị ọrụ si ahụ ngwaahịa gị ga -emetụta ihe ha dị njikere ịkwụ.
Nye na ịchọrọ. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ ngwaahịa a n'agbanyeghị ihe ọ bụla, ọ gaghị adị mkpa ịkwụkwu ya. Mana ọ bụrụ na ha achọghị ya, ị ga -agbada ọnụahịa iji nwee ike ree ya.
Kedu usoro iji tọọ ọnụ ahịa ahụ
Enwere ụzọ abụọ a na -ejikarị agbakọ ọnụ ahịa ere ngwaahịa. Ọ pụtaghị na ị ga -adabere na ha ebe ọ bụ na ị ga -eburu n'uche ihe ndị ọzọ, dị ka anyị hụworo.
Ụzọ uru dị ukwuu. Ọ bụ ụzọ omenala esi mata ego ole a ga -ere ngwaahịa maka ya. Ihe a na -eme bụ ikpebi ihe bụ pasent nke uru ngwaahịa a nwere.
Oke onyinye. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, uru ịchọrọ ị nweta site na ire ngwaahịa ahụ. N'ụzọ dị otu a, ị na -ahụ na ị nwetara uru ahụ n'agbanyeghị mmefu nke ngwaahịa a.
Ọnụ ahịa ọrịre dị ala ma ọ bụ dị elu ka mma?
Ọtụtụ nwere echiche itinye ọnụ ahịa dị ka o kwere mee, na ebumnuche nke ịkwalite ahịa na ime ka ndị mmadụ zụta ihe. Mana ị nwere ike ịhụ onwe gị n'eziokwu na -adịghị mma: na ị naghị ere ere.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ịbelata uru na mbọ ime ka amara ha ma ọ bụ maka ịme nkwalite pụrụ iche. Nsogbu bụ na, mgbe ụfọdụ, ọnụahịa ahụ naanị ihe na -akpata bụ na enwere ụgwọ karịa n'ihi na anaghị ekpuchi mmefu niile. Ma ọ bụ, kpuchie onwe gị, ị chọpụta na ị naghị ere ere.
Nke a bụ ihe a na -ahụkarị, ọkachasị na eCommerces. Ka anyị were ihe atụ:
Were ya na e nwere ekwentị nke ị hụrụ n'anya. Na eCommerce ọ na -efu gị euro 150 na euro 400 ọzọ. Ọnụ ego "nkịtị" nke ọdụ a bụ euro 350. Ugbu a, anyị na -ajụ gị, kedu nke ị ga -ahọrọ n'ezie? Ọ bụ na ị gaghị enwe obi abụọ ịzụrụ otu euro 150 n'ihi na ị chere na ọ bụ wayo, ma ọ bụ na ha agaghị ezitere gị ekwentị ịchọrọ, na ọ dị mma, wdg. N'ọnọdụ ndị ahụ, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ya na euro 350, ihe kachasị dị na ya bụ, ọ bụrụ n'ezie na ịchọrọ ya, ị na -etinyekwu ego maka ya, kama ịbelata.
Ma ọ bụ na mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na ị belata ọnụahịa ahụ nke ukwuu, ị nwere ike ịhụ onwe gị n'ọnọdụ a. Kedu ihe gaara eme ma ọ bụrụ na kama ịjụ euro 150 ha rịọrọ 300? Ọ dị mma, ebe ọ dị nso na ọnụ ahịa mkpọsa nke ọtụtụ nwere, n'ikpeazụ ị ga -ahọrọ nke 300 n'ihi na ọ bụ ịchekwa ma ọ bụghị mbelata nke ukwuu ime ka ị nwee obi abụọ.
N'akụkụ bụ aha ụlọ ahịa, ma ọ bụrụ na o nwere echiche ma ọ bụ ọkwa, wdg. (nke nwekwara ike imetụta mkpebi ikpeazụ).
Na nkenke, ihe anyị na -achọ ịkọwaara gị bụ na, mgbe ụfọdụ ọnụ ala ga -eme ka ndị ahịa ghara ịtụkwasị ịdị mma gị obi, ngwaahịa na ụlọ ọrụ n'onwe ya. Ọ bụ ezie na nke dị elu ga -amachi ndị ahịa nke ukwuu (ọ dị ka anyị kwuru, ọ bụrụ na ịchọta ya dị ọnụ ala, ma ịchọrọ ya n'ezie, ị ga -akwụkwu ya ụgwọ).
Ugbu a ọ bịara doola gị anya etu esi gbakọọ ọnụ ahịa ere nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Otu esi gbakọọ ọnụ ahịa ire ere
Mgbe na otu esi ekwupụta ego enwetara na ịntanetị